Chelsea oo guul dirqi ah kaga gaartay Stamford Bridge kooxda Vidi FC kulankooda labaad ee heerka group-yada koobka Europe League – Gool FM
Chelsea oo guul dirqi ah kaga gaartay Stamford Bridge kooxda Vidi FC kulankooda labaad ee heerka group-yada koobka Europe League
(Europe League) 04 Okt 2018. kooxaha Chelsea ayaa si dirqi ah guul kaga gaartay garoonka Stamford Bridge dhigeeda Vidi FC kulankooda labaad ee heerka group-yada ee koobka Europe League, kadib markii ay kaga adkaadeen 1-0.
Kulankan ayay labada kooxood Chelsea iyo Vidi FC ka sameeyeen qaab ciyaareed cajiib ah, iyadoo kooxda Blues ku dhax sugneed jamaahiirteeda ay u muuqatay mid inta badan maamuleesay ciyaarta.
Qeybta koowaad ee ciyaarta ayay labada kooxood Chelsea iyo Vidi FC ku kala nasteen barbaro 0-0, waxayna labada dhinacba ku guuldareysteen in ay shabaqa gaaraan.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay kooxda Chelsea ayaa ciyaarta dib ugu soo laabatay si xamaasadeysan, waxayna u muuqdeen kooxda inta badan iska maamuleesay ciyaarta.
Goolka qura ee kooxda Chelsea ayaa yimid daqiiqadii 70-aad ee qeybta labaad ciyaarta waxaana u dhliyay laacibka reer Spain ee Alvaro Morata, kaasoo caawin ka helay saaxiibkiis Willian, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0.
Kooxda martida ahayd ee Vidi FC ayaa qeybaha dambe ee ciyaarta sameesay isku dayo badan ay ku doonayeen inay ku helaan goolka barbaraha, balse ugu dambeyn way ku guuldareesteen.
Ugu dambeyn kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea ayaa guul ku gaartay 1-0, kulankooda labaad ee heerka group-yada ee koobka Europe League.
Riyad Mahrez oo sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha uu gaarka kaga yahay Guardiola macalimiinta kale